Nandamina Christmasmarket Holms vehivavy mpikarakara tokantrano 'League.
Holm vehivavy mpikarakara tokantrano 'ny Ligy dia fikambanana ny orinasa, fialam-boly sy ny fiaraha-mientana. Anisan'ireo vehivavy mpikarakara tokantrano hafa fandaharana tsena Krismasy sy ny parasy tsena ao an-tanàna.
2011 anordnade Holms Husmodersföreningen in samabete amin'ny Österström Conference & Kursgård Krismasy tsena sy ny sakafo Krismasy miaraka amin'ny fiara fitaterana maro safidy avy Sundsvall. Ny fiara fitateram-bahoaka ihany koa ny safidy nandeha namaky Liden Fiangonana amin'ny fiatoana-pivavahana.
26/9: Utah: fampitandremana kilasy 1, be volo ... Andrefana rivotra miaraka amin'ny tena mafy ... hamaky bebe kokoa
Fram t o m söndag 26 oktober är all tågtraf... hamaky bebe kokoa
19/10: Contact tsipiriany